Top 4 Siyaabaha Photos iPhone kaabta in External Hard Drive on Mac
> Resource > Mac > Top 4 Siyaabaha Bedelka iPhone Pictures in Drive External Hard ah ee Maverics
Waxaa caadi ah in ay sawiro ka iPhone wareejiyo drive dibadda si ay u hubiyo in gurmad ah ammaan la hayo iyo xusuusta telefoonka ee la miyir ku maarayn karo. Haddii aad rabto in aad sawirrada ka iPhone wareejiyo drive dibadda adag in Mavericks, halkan war ku faraxsan aad u. Waxaan halkan bixinta 4 siyaabo fudud oo haboon in la sawiro iPhone gurmad si drive dibadda Mac.
# 1. Bedelka sawiro ka iPhone in an drive adag dibadda ee Mac la kulanka xiisaha leh
# 2. Isticmaal iPhoto in ay sawiro iPhone gurmad si drive dibadda adag ee Mac
# 3. Isku day Ciidamada Image si loo badbaadiyo iPhone sawiro drive dibadda ee Mac
# 4. Ka Wondershare TunesGo (Mac) inay u dhoofiyaan sawiro ka iPhone in drive dibadda adag
# 1. Bedelka sawiro ka iPhone in an drive dibadda adag ee Mac la Kulanka Xiisaha Leh
Haddii aad rabto in lagu badbaadiyo sawirrada iPhone in drive dibadda ee Mac, kulanka xiisaha leh waxay noqon kartaa Saaxiibka kaamil ah oo aad u. Waa codsiga fudud oo anfacaya oo degdeg ah oo la yaab leh ka shaqeeya. Dhammaan waxa aad u baahan tahay inaad samayso waa in lagu xiro aad iPhone in aad Mac dhex cable USB ah. Hadda fur codsiga oo guji badhanka File menu iyo doortaan 'Import From' doorasho oo ay la socdaan magaca iPhone. Si dhakhso ah, qaarna lagu soo bandhigi doonaa oo dhan bandhigaya sawiro ku saabsan iPhone Camera Roll oo aad si fudud u soo jiidi kartaa oo hoos u drive dibadda adag ee Mac.
# 2. Isticmaal iPhoto in ay sawiro iPhone gurmad si drive adag dibadda ee Mac
Isticmaalka iPhoto waa mid ka mid ah siyaabaha ugu haboon si ay u dhoofiyaan sawiro ka iPhone in drive dibadda adag in Mavericks. Sida ugu dhakhsaha badan ee aad ku xidhi doonaa iPhone aad kula Mac, iPhoto laftiisa si toos ah u bilaabi doonto. Suuqa kala dejinta ayaa furi doonaa oo dhan videos iyo sawiro aad iPhone Camera Roll aad soo bandhigi doonaa. Hadda waxaad riixi kartaa 'Import All' doorasho haddii aad rabto oo dhan alaabta ku qoran liistada in lagu wareejiyo your computer iyo haddii aad rabto oo kaliya waxyaabaha soo xushay in lagu wareejiyo, waxaad dooran kartaa waxyaabaha la doonayo ka dibna riix 'Import soo xulay' doorasho. Marka aad soo dhoofiyo soo xulay, sanduuqa hadal furi doonaa oo waxaad ku dhaliyay in ay tirtirto kuwa sawiro ka iPhone oo lagu wareejiyay. Waad haysan kartaa ama tirtirto sawirada, sida aad rabtid in aad.
# 3. Isku day Ciidamada Image si loo badbaadiyo sawirrada iPhone in drive dibadda ee Mac
Waxaad isticmaali kartaa Ciidamada Image on Mac inuu u dhaqaaqo sawiro ka iPhone in drive dibadda adag haddii aadan rabin in aad isticmaasho iPhoto ama haddii iPhoto aan lagu rakibay on your Mac. Dhammaan waxa aad u baahan tahay inaad samayso waa in lagu xiro aad iPhone in aad Mac. Ciidamada Image si toos ah laftiisa lagu daahfuri doonaa. Haddii aanu furan, soo baadhaan ka mid ah codsiyada oo la furo. Hadda dooro meesha aad Mac kaas oo aad rabto in aad wareejiso sawirada. Hadda riix tab Options iyo dooro 'Delete waxyaabaha ka camera ka dib soo degsado' doorasho; waxay kaa caawin doontaa in aad lacag la'aan ah ilaa iyo xusuusta aad iPhone. Hadda dooro ikhtiyaarka OK ka dibna riix 'Download All' doorasho.
Codsiga aad u fiican in ay sawiro ka iPhone wareejiyo drive dibadda adag in Mavericks, Wondershare TunesGo Mac (hore loo yaqaan Wondershare MobileGo for iOS Mac) shaqeeyaa sida Lugood iyo wax ka badan. Waxay kaa caawinaysaa in aad maamuli music, videos, iyo sawirro ku saabsan qalabka Apple aad sida iPad, iPod, iPhone iyo Mac. Isticmaalka Wondershare TunesGo, waxaad si fudud u wareejin kartaa sawirro aad ka soo giringiriya Camera, Photo Library, iyo Photo Stream aad iPhone in drive dibadda on your Mac. Dhammaan waxa aad u baahan tahay inaad samayso waa in lagu xiro aad iPhone in aad Mac la cable USB ah, ha codsiga laftiisa abuurtaan, dooro sawiro aad rabto in lagu wareejiyo oo ugu dambeyntii dooro 'dhoofinta' doorasho.
Isku day Wondershare maxkamad version TunesGo hadda!